I-Semalt Expert Ichaza iingcebiso ezichasene ne-Malware
I-Malware ibhekisela kuzo zonke iifayile eziyingozi ezenza ikhompyutheni rhoqo ngaphandle kolwazi lomnini. Iintsholongwane, i-adware kunye ne-spyware zizinye ze-malware eziqhelekileyo. I-Malware ingaphazamisa okanye iphucule imisebenzi yekhomputha, itshise ulwazi, vumela ukufikelela okungagunyaziswanga kwizibonelelo zenkqubo, kubangele ukuphazamiseka rhoqo okanye ukuphazamiseka, kunye nezinye iziphazamiso.
Ababhali be-Malware badla ngokukhohlisa abasebenzisi ukukhuphela iifayile ezinobungozi, kwaye kutheni ezininzi iintlobo ze-malware zingena kwiikhompyutheni ezingaqatshelwayo.
Kubaluleke kakhulu ukuba uthathe amanyathelo okuqaphela ukuba ufumane i-malware kwaye ukhusele ukuba ungabhubhisi kwaye uyonakalise inkqubo yakho.
uJack Miller, umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-20 (Semalt , uchaza iindlela ezithembekileyo zokwenza oku:
1. Sebenzisa i-anti-virus-to-date-anti-virus kwaye usetyenzise iifenethi
Le ngenye yezenzo ezibalulekileyo zonke iimpahla zekhompyutheni / umsebenzisi kufuneka azenze ukuze agcine iikhompyutheni zazo zikhuselekile kwiintsholongwane ze-malware. Njalo sebenzisa ukukhuselwa kwintsholongwane ye-anti-virus kwaye ufake ii-software zohlaziyo kunye nee-patches ngokukhawuleza xa zikhutshwa.
Ukusebenzisa ukukhuselwa kwintsholongwane ye-anti-virus kukunceda ukuba ugweme "ukuqhubela phambili" ukulandwa - izikripthi kwiwebhusayithi ezinobungozi ezisebenzayo nokufaka i-malware ngasese.
Kunyanzelekile ukuba ukhumbule ukuba akuyiyo yonke imithombo yamaphepha kunye nokuhlaziywa. Qinisekisa ukuba ufumana ukuhlaziywa kwesofthiwe yesicelo kubaboneleli abakhulu abanjengoMicrosoft, Apple, Adobe kunye neJava.
2. Ungaqakraza iikhonkco okanye izinamathiselo kwiimeyile ezixhasayo
Ama-imeyili asetyenziswe ukusasaza i-malware ixesha elide. Ngokuqhelekileyo, i-imeyile esetyenziselwe le njongo iya kuba neefayile ze-malware njengesiqhotyoshelweyo. I-imeyile inokubonelela ngekhonkco eyokusa kwiwebhusayithi uze ubeke ngesandla ngokungekho i-malware okanye wenze i-"drive-by" yokukhuphela. Ukukhusela i-malware ithunyelwe nge-imeyili:
Ungaqakraza iikhonkco okanye uvula ii-imeyile ezinokufakelwa ukuba i-imeyile ivela kumthombo ongaziwa okanye ongathembekiyo..
Nangona uyayazi umthombo kodwa i-imeyile ibonakala ilungisa, qha ga mshelana nomthumeli kwaye uqinisekise ukuba isiqhotyoshelweyo okanye isixhumanisi sithetha ntoni.
Akukaze kuvule izikhonkwane ze-imeyile eziphela nge .bat, .exe, .vbs, okanye .com.
3. Qaphela inzululwazi yoluntu
Ubunjineli bezentlalo yindlela esetyenziswa ngayo ukukhohlisa umntu ukuba athathe isenzo. Akuyona into embi ekuthethwa ngayo, kodwa i-malware propagators ingayisebenzisa ukusasaza iinjongo ezinobungozi. Ngokuqhelekileyo basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokubamba ingqalelo kwaye cofa ukhonkco kwiwebhusayithi enobungozi. Emva kokuba u tyelele indawo, i-malware ifakwe kwisistimu yakho.
Ezinye iindlela ezithandwayo zobunjineli zentlalo ziquka:
Ukuqhagamshelanisa ukukhawulelana - ukubonelela i-teasers ukudala umdla kumxholo owenziwe
Izilumkiso ze-popup - i-popups ezikwazisa ukuba idivayisi yakho inenkinga kwaye ukuba uyilungise, kufuneka uqhawule isilumkiso. Ikhonkco inokukukhokelela ekufakeni isofthiwe (leyo yi-malware). I-"drive-by" yokukhuphela nayo ingasungulwa ngokulumkisa kwipopop.
Abadlali beMediya - i-malware nayo isasazeka ngabadlali bamaphephandaba ngale ndlela: mhlawumbi uye watyelela iwebhusayithi kwaye wafumana ividiyo ekhangayo. Kodwa ukuba udlale, iwebhusayithi ikuxelela ukuba kufuneka ufake ifayile yomdlali wesigidimi. Nangona kunjalo, ngokwenene, uya kufaka i-malware.
Unokuziphepha ezi ngxaki ngokungakhangeli okanye ukubandakanya nayiphi na iwindi yokuphambuka ebonakalayo. Kwaye kwesoftware yemidiya yemidiya, kungakhathaliseki ukuba ikhutshwe njani ividiyo, ungalokothi ufake ifayile ephakanyisiweyo apho. Ukugcina ifowuni yakho ikhuselekile, soloko ufaka isofthiwe kwiiwebhusayithi ezithembekileyo.
4. Sebenzisa iinkqubo zokwabelana ngefayile
Iiwebhusayithi zokubelana ngewebhusayithi kunye neenkqubo zingenakho i-malware. Ungakwazi ukufaka i-malware ngokungazi xa ufaka iProer-to-Peer (P2P). Kwakhona, unokufumana i-malware eguqulwe njengevidiyo okanye imfayile yefayile yokukhuphela.
Qinisekisa ukuba nayiphi iprojekthi yeP2P ofuna ukuyifaka iqinisekisiwe i-malware. Kwakhona, akufanele uvumele i-P2P ukulayisha okanye ukuvula nayiphi na ifayile ekhutshwe phambi kokuyihlola kwiintsholongwane.
Abakwa-Cybercriminals baya kuhlala bequlunqa isofthiwe ewonakalisayo kwaye bayisasaze ukuze bafezekise iinjongo zabo ezinobungozi. Wonke umntu kufuneka ahlale eqaphele ngokukhusela iinkqubo zabo Source .